Kerry iyo Uhuru oo kulan wada qaatay – The Voice of Northeastern Kenya
Kerry iyo Uhuru oo kulan wada qaatay
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxa u shalay la kulmay xoghayaha arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka John Kerry waxana kulanka laba geesodka ah u ka dhacay aqalka madaxtoyada dalka ee waddankan Kenya looga arrimiyo ee State House.
Waxyabaha diirada lagu saaray kulankaas ayaa waxa ay ahaayen sida looga hortagi lahaa falalka argagixisnimo waxa sidoo kale ay labadan masuul ka wada hadleen xalada ammaan ee waddamada Soomaalia iyo koofur Sudan.
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxa u sheegay in xisadaha dhawaan ka soo cusboonaaday magaala madaxda waddanka koofur Sudan ee Jubba in ay dhawici karto wada xaajodka dhex maray dhinacyada waddankaas isku haya kaas oo la kala saxiixday biisha august ee sanadki tagay.
Waxa sidoo kale shirkaas qeyb ka ahaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalkan Kenya Amina Mohamed Jibril iyo sidoo kale wasiirada wasaarada dhirta iyo deeganka Judy Wakhungu.
Xoghayaha ayaa waxa wehlinaayay kuxigeenka arrimaha Africa ee maraykanka Linda Thomas-Greenfield,agaasimaha qaran ee ammaanka ee arrimaha Maraykanka ee Africa Martis Flacks,Ergeyga arrimaha maraykanka ee Koofur Sudan iyo sido kale danjiraha maraykanka u fadhiya waddankan Kenya Robert Godec.
Kadib kulanki u la qaatay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Wasiirada arrimaha dibadda ayaa waxa u xoghaye Kerry ka codsaday dawladda Koofur Sudan ee u madaxa ka yahay Salva Kiir in ay aqbasho in ciidamo dheerad ah oo 4,000 in la geeyo waddankooda si ay gacan ugu geeystan dadaalada loogu jiro in waddankaas xasilooni loogu soo dabaalo.
Waxa u sidoo kale ka codsaday hoggaamiyaasha isku heya waddankaas in ay colaada sii hurinin maadama ay u horseedi karto waddankaas in u galo dagaalo sokeeya waxa u sidoo kale Kerry ka dhawaajiyay in guulo laga gaaray dagaalka lagu la jiro xarakada Shabaab ee ka dagaalanta waddanka Soomaalia.
Kerry ayaa waxa u sidoo kale sheegay in doorasha xor iyo xaq ah ee ka dhacda waddanka ay dadka Kenyanka ah muhiim u tahay.
← Madaxweyne Uhuru oo soo xulan doono 7 kamid ah sarakiisha gudiga IEBC kala wareegi doonto xafisyada
Ciidamada booliska ka qeyb qaadan doona doorashada 2017-ka oo turxan bixin lagu sameeyn doono →